mushaTHE WORLDASIA98 IranIstanbul Tehran 3 Anonyanya Kuzivikanwa Anofamba
09 / 01 / 2020 98 Iran, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, Airports, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, TURKEY
yakakurumbira nzira yekufamba pakati istanbul uye tehran
Paunenge uchifamba muMiddle East iwe zvechokwadi uchada kuenda kuIstanbul nenharaunda yakatenderedza uye unogara mazuva mashoma ikoko. Turkey aikosheswa kushanyirwa ndechokuti Istanbul ndiro chete guta. Pane zvakawanda kuonekwa kumativi Turkey, asi vakawanda vashanyi vari kusvetuka zvikuru vavo. Nekudaro, iwe pakupedzisira unoda kushandisa zororo refu-refu, uye ungangodaro uri kuronga kuenda kumaguta maviri kana matatu kana kunyangwe nyika panguva imwe chete. Istanbul uye Tehran, Iran uye Turkey dzakakurumbira dzakasiyana kuti ushanyi. Kune nzira nhatu dzakakurumbira dzekusvika Tehran kubva kuIstanbul.
Nzira yakasununguka kwazvo asi zvakare inodhura nzira yekusvika Tehran kubva Istanbul Ndege. Ndege dzakananga dzinoitwa nemaTurkey makuru eendege. Mitengo yematikiti inotanga kubva pamadhora zana nemakumi matatu pamatanhatu panzendo Iyo kubhururuka kunotora anenge maawa matatu.
Imwezve yekufambisa iwe yaunogona kushandisa kusvika Tehran ibhazi. Nehurombo, hapana bhazi rakananga kubva kuIstanbul, saka iwe unofanirwa kutanga waenda ku Ankara uye uende kuguta guru reIran kunotsvaga kambani yebhazi inoshanda ikoko. Mari yacho iri madhora zana munzira imwe chete. Rwendo rwacho runotora anopfuura maawa makumi matatu uye ndirwo rwunogarika pakati pematatu matatu akapihwa.
Iwe unogona pakupedzisira kusvika Tehran nechitima kubva Istanbul. Vafambi vari kuwana zvakanyanya kudhura uye kwakanyanya kufambisa kutakura kune chitima. Nzendo dzakadaro dzinogona kutora nguva dzakapihwa chinhambwe asi zvakare zvichinetsa. Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vafarire chitima kune dzimwe nzira dzekutakura kana uchifamba. Imwe yeaya zvigaro zvakakura zvinoshandurwa kuita mibhedha usiku uye nyaradzo panguva yekufamba-famba kwenguva refu iyo iwe yaunogona kuparadzira panzvimbo yekutsvedza mukati meyepasi-chikamu chezvemhepo ndege. Transasia Express zita rakapiwa muTurkey uye Ankara vane unobva yaitevedza Lake Van uye Tehran. Rwendo rwune zviitiko zvitatu zvakasiyana. Idzi dzinosanganisira nzendo mbiri dzechitima uye kukwira chikepe chimwe chete. Uye zvakare, kutakurwa kubva kuIstanbul kuenda kuAkara kunopihwa nechitima chekumhanya zvakanyanya. Vafambi vanosarudza kufamba kwechitima neTransasia Express nekuda kwechiitiko chavo. Vapfuuri vanofamba vari muchikepe vakanakirwa nekutarisa zvinoyevedza zvinoonekwa, zvakanakisa maonero uye nemvura yeLake Van, kusangana nevanhu vanonakidza, vagari venzvimbo vane hushamwari uye vashanyi vane ruzivo, pamwe nekunakidzwa nerusununguko nerunyararo rwechisikigo. Tarisa iripo matikiti pano (ari Transasiatra) uye gadzirira mutambo mutsva.
Inonyanya kuzivikanwa nechepakati yekudenga muAmerica
'Kushamisa' Kuzarura kuWaldağ's Popular History Exhibition
Ongorora Kuedza Kuratidza Kuti Nei Cisco Certificates Inowanikwa
Iran inotora Istanbul semuenzaniso muTehran Subway
Akazosvika bhiriyoni imwe makumi mashanu emamiriyoni euros muTehran uye Tabriz metro mapurojekiti muGerman…
Mepu yeTehran Metro
72 neawa nechitima ...
Tehran anotarisira matanho kubva kuJerevan kuIrish-Armenia railway
Tehran - Mashhad Line Electrification project ichabhadhara China
China Makambani anosayira Tehran-Masat Electrification Agreement
Nakhichevan-Tabriz-Tehran-Mashhad Train Expeditions Yakatanga
İsa Apaydın Anopinda musangano weUIC-RAME muTehran
TAHRAN- Ankara chitima chakabva Muş.
Tehran yakagadzirira kuvaka tereji muArmenia uye kumirira mari
Istanbul Tehran Kufamba
Kubatana kwebhazi kuenda uye kubva kuIstanbul Tehran
Istanbul Tehran chirongwa chechitima
Istanbul Tehran ndege
Chitima cheTransasia Express